JIBE, charger marobe ho an'ny MacBook sy MacBook Pro | Avy amin'ny mac aho
JIBE, charger marobe ho an'ny MacBook sy MacBook Pro
Ny marina dia manana fitaovana marobe hatrany an-tampony isika. Ratsy indrindra? Mila charger ho azy rehetra isika. Ho fanampin'izany, misy fotoana izay na dia tsy mila mitondra afa-tsy ny tariby mandefitra aza isika dia tsy manome bebe kokoa ny tenany ny seranan-tsolosaina. Noho izany dia tian'ny orinasa JIBE dia nieritreritra ny handefa fitaovana fanampiny hanonerana izany tsy fahampiana izany.
Mieritreritra ireo mpampiasa ny maodely MacBook sy MacBook Pro farany izay somary zara raha misy seranana, JIBE dia mandefa ny multi-charger hahafahantsika mampitombo ireo seranana ireo ary manana fifandraisana mahaliana amin'ny solosaina finday. Inona koa, hanana tobim-piantsenana famandrihana ho an'ny fitaovana hafa izahay.
JIBE dia manana kinova roa an'ny multi-loader. Samy ny JIBE Edge sy maodely JIBE Pebble. Samy hamidy eo anelanelan'ny volana manaraka amin'ny volana Janoary sy Febroary 2018, avy. Toy izany koa, ny maodely roa dia afaka miasa ho toy ny charger mahazatra sy ankehitriny izay mifandray amin'ny trano, birao, cafeteria, sns.
Manomboka eo dia hanana, amin'ny maodely roa isika Seranan-tsambo USB-C 2, seranan-tsambo USB-A 3 ary eo amin'ny JIBE Edge dia misy port HDMI mifanaraka amin'ny vahaolana 4k amin'ny 30 fps. Mandritra izany fotoana izany, ireo kinova roa dia afaka mahatratra ny tahan'ny fandefasana data eo anelanelan'ny solosaina hatramin'ny 5 GB / s. Ary koa, araka ny filazan'ny orinasa, miaraka amin'ity charger ity dia hahatratra 2 heny avo mihoatra ny charger mahazatra nomen'i Apple izahay.
Ny maodely marobe misy charger izay nofidinao, tariby USB-C, ny tariby izay handeha ho any amin'ny fivoahan'ny herinaratra sy fonosana fiarovana raha toa ka milatsaka amin'ny tany izany dia ampidirina ao amin'ny fonosana fivarotana. Ny vidiny nanombohany ny JIBE Edge dia $ 69 (58 euro eo ho eo no hanovana), raha ny JIBE Pebble, ny kely indrindra amin'izy roa dia hanomboka amin'ny $ 59 (49 euro hanovana). Amin'ity dia tsy maintsy ampidinao fa any ivelan'i Etazonia, izay misy ny fandefasana dia maimaim-poana, dia mila manampy fandefasana $ 10 hafa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » JIBE, charger marobe ho an'ny MacBook sy MacBook Pro
Ruben gallardo dia hoy izy:
Hehehehehe! Tsy maintsy nihomehy aho nahita an'io. Nahitsy. Misaotra tamin'ny fampitandremana!
Valiny tamin'i Ruben Gallardo
Tonga ny TvOS 11.2 miaraka amin'ny lahasa HDR sy ny fisafidianana sary ho an'ny Apple TV 4k